Mayelana NATHI - Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd.
Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd. (eyayaziwa njengenkampani iTaizhou Wan De Kai Hardware Product Limited), eyasungulwa ngonyaka we-1995, itholakala "enhlokodolobha ye-valve yaseChina" - iZhejiang, iYuhuan, iqoqo lomklamo womkhiqizo nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengiswa nokuhwebelana we-professional enterprises valve (amapayipi). Imikhiqizo ihlukaniswe kakhulu ngezigaba ezintathu: ama-valve wethusi, okufakwa ngethusi, imikhiqizo ye-HVAC. Ukuma komkhiqizo ebangeni eliphakeme, ebangeni, okugqamisa ubuhle bezemvelo, bekuyiNyakatho Melika, iYurophu nezinye izimakethe ezithuthukisiwe zabathengi.
Indawo yenkampani ekhona yezindawo zamamitha ezingama-56000square zokwakhiwa kwamamitha ayi-32000square, abasebenzi abangaphezu kuka-500, kufaka phakathi nabaphathi abaphezulu kuka-70. Le nkampani inezinto zokukhiqiza ezithuthukisiwe nemishini yokuhlola, kufaka phakathi amasethi ayi-140 amathuluzi omshini we-CNC, umshini okhethekile ongenisiwe amasethi angama-35 ukuhlolwa, isikhungo sokuhlola 1.
Le nkampani isidlulile uhlelo1994 edition, 2000 edition, 2008 Edition ISO9000 quality management system certification; Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo kwe-ISO14001 2004 kanye ne-OHSAS18001 - 2007ukutholakala kwesitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha, ukwakheka kwayo kanye nokuthuthukiswa kokuphathwa kwe-PEX, i-valve yebhola, i-angle valve nayo ngokulandelana idlula emazweni aseNyakatho Melika kanye nasezifundeni ze-NSF, CSA, UPC, UL njengesitifiketi somkhiqizo.
Ngo-Agasti 5th, ngesikhathi sokuhlelwa kabusha kwenhlangano yezomnotho ebumbene yaseYuhuan County, umnikazi wendawo wathola ilungelo lobunikazi nokusebenza kwesikhungo sokulungisa imishini saseYuhuan County Longxi.
Ukuthola indondo yegolide "yamabhizinisi wezezimboni we-1994 wonyaka we-1994" nguhulumeni wesifunda kanye nohulumeni wesifunda, ngoJuni 4, ifektri yokulungisa imishini yaseYuhuan Longxi kanye neTaiwan Cheng Li industry Limited yiShare Ltd ngokuhlanganyela, bahlela iTaizhou wad Hardware Co ., Ltd., bese uthola ilungelo lokungenisa nokuthekelisa.
NgoDisemba, leli bhizinisi laklonyeliswa nge- "Taizhou excellentship Township Award" yiTaizhou Township Enterprise Bureau.
NgoFebhuwari, amabhizinisi ahlonishwa yikomidi le-Yuhuan County Party kanye nohulumeni wesifunda njengamabhizinisi aphezulu ayi-100 ezimbonini e-Yuhuan County ngo-1996. "Lesi sakhiwo sihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-8658 futhi sinendawo yokwakha engamamitha-skwele angama-4950 ( manje uMnyango wokufudumeza amanzi kanye neTaizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co, Ltd.) yasekuqaleni, futhi ususetshenzisiwe. "Ukuhlanganiswa kwamanzi okuphathwa kwamanzi" okwenziwe ngamabhizinisi kwanikezwa umklomelo womibili wokuqhubeka kwesayensi nobuchwepheshe Uhulumeni wase-Yuhuan County ngo-1997. I "othomathikhi yokufafaza ingadi" eyenziwe yinkampani iklonyeliswa ngemiklomelo emithathu yenqubekela phambili yesayensi nezobuchwepheshe kuhulumeni kamasipala waseTaizhou ngo-1997. "
NgoFebhuwari, kwasetshenziswa indawo yokwakha engama-939.51 square metres (manje uMnyango wokushisa amanzi kanye neTaizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co, Ltd.) yasekuqaleni.
Amapayipi e-PEX, ama-valve endandatho kanye nama-valve ekhoneni aklanywe futhi athuthukiswa yithina futhi adlulise isitifiketi somkhiqizo we-NSF, i-CSA ne-UPC emazweni nasezifundeni zaseNyakatho Melika.
Isitifiketi se-ISO14001-2004 sokuphathwa kwemvelo kanye nesitifiketi se-OHSAS18001-2007 emsebenzini
Kuphumelele uhlelo lwe-1994, olwe-2000 kanye nohlelo luka-2008 lwe-ISO9000 lokulawulwa kwesitifiketi sohlelo.